Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad ka caawin karto horumarinta boggan
Tusaha Xubnaha Bird: Waxaan si joogto ah uga shaqeynayaa xogta qaybinta. Haddii aad leedahay sixitaan ama ku darno liisas si aad u sameysatid liis warbixineed oo jira, ama liiska hubinta gobolka cusub ee aan hore loo daboolin, waxaan jeclaan lahaa inaan kaa maqlo.
Diiwaanka nolosha-taariikhda: Mid ka mid ah ku darida ku xigta bogga wuxuu noqon doonaa macluumaad ku saabsan shimbiraha nolosha-taariikhda. Waxaan billaabay inaan ururiyo macluumaadka ku saabsan xajmiga xajmiga, muddada kaboojinta, heerka noolaanshaha, iwm, gaar ahaan shimbiraha Waqooyiga Ameerika, laakiin weli wali waa waddo dheer oo lagu daboolayo dhammaan noocyada shimbiraha. Macluumaad kasta oo aad bixin karto oo ku saabsan nolosha-taariikhda ayaa aad loo qiimeeyn doonaa.
Tarjumaadaha: Boggani wuxuu horayba ugu jiraa luuqado kala duwan, marwalba waxaan xiiseynayaa inaan ku daro kuwa cusub. Haddii aad xiiseyneyso inaad bixiso tarjumaad cusub, waxaan kuu soo diri karaa faylal Excel oo ku jira qoraalka meeshan (qiyaastii 6000 erey). Waxaan sidoo kale waligey raadinayaa shimbiraha isku midka ah ee luuqadaha kale.
Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo qof kasta oo ka caawiyay dhismaha Avibase sannado badan. Inkasta oo aan dadaal u galiyay inaan ku daro magacyada qof kasta oo iga caawiyay liiska hoose, waxaan raali gelinayaa qof walba oo aan illoobo. Waxaan ku farxi doonaa magacaaga haddii aad la soo xiriirto. Dhinaca kale haddii, sabab kasta, waxaad doorbideysaa in magacaaga uusan ku muuqan liistadaan, fadlan sidoo kale ii sheeg.
* Waxay muujineysaa qof gaar ah oo bixiya macluumaad badan
Avibase ayaa la booqday 323,778,990 jeer laga bilaabo 24 Juun 2003. © Denis Lepage | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah